ကိုရီးယားနိုင်ငံက ချီးမြှင့်တဲ့ Asia Model Award ဆုကို ရရှိခဲ့တဲ့ ဖွေးစိန်လေး – Bagan Thar
ပြည်သူချစ်မင်းသမီးလေးဖြစ်တဲ့ဖွေးစိန်လေးကတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒိတ်ဒိတ်ကြဲအောင်မြင်နေတဲ့မင်းသမီးတွေကထဲက တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အကယ်ဒမီထူးချွန်ဆုနှစ်ဆုကိုလည်းထိုက်ထိုက်တန်တန်ရရှိထားပြီးအခုအခါမှာတော့နိုင်ငံတကာကချီးမြှင့်တဲ့ဆုကိုရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
အကယ်ဒမီများရှင် နိုင်ငံကျော်မင်းသမီး ဖွေးဖွေးကတော့ ယနေ့မှာပဲကိုရီးယားနိုင်ငံကချီးမြှင့်တဲ့ Asia Special Award ဆုကိုရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါဆုကို၂၀၁၉ခုနှစ်ကတော့နိုင်ငံကျော်မင်းသမီးအကယ်ဒမီဝတ်မှုန်ရွှေရည်ကရရှိခဲ့ပြီး ယခု ၂၀၂၀ မှာတော့ဖွေးဖွေးကဆွတ်ခူးရရှိခဲ့ပါတယ်။
ကိုဗစ်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ ဆုလက်ခံရယူလို့မရခဲ့ပဲ ယနေ့ဒီဇင်ဘာ ၅ ရက်နေ့မှဆုရောက်ရှိတဲ့အကြောင်းကို ဖွေးဖွေးကအခုလိုပဲပြောပြခဲ့ပါတယ်။Thank You untact 2020 Asia Model Awards in Seoul ! Thank You For choosing me ! ကိုဗစ်ကာလဖြစ်လို့ Seoulကိုမသွားရတော့ပဲAsia Special Award ဆုကတော့ Korea ကလှမ်းပို့လိုက်လို့ ဖွေးလက်ထဲရောက်နေပါပြီရှင့်။
နောက်နေ့မှကျေးဇူးတင်စကားကိုစာရှည်ရှည်ရေးပြီးအမှတ်တရပုံရိုက်ပြီးတင်တော့မယ်ရှင့် Heeeee so happyyyyဖွေးကို ဒီCareer တလျှောက်လုံးချစ်ပေး အားပေးခဲ့ကြတဲ့ဆရာ၊မိဘ၊ဖွေးကို ချစ်ပေးသူ Darlings၊ Oopsiesတဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းအတွက်ယူတဲ့ဆုလေးပါရှင်I hope you are proud of me.It’s all love ဆိုကာသူမရဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာကနေတဆင့်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ကိုရီးယားနိုင်ငံကချီးမြှင့်တဲ့ Asia Special Award ဆုကို ၂နှစ်ဆက်တိုက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထိပ်တန်းမင်းသမီးများရရှိခဲ့တာဟာတကယ်ကိုဂုဏ်ယူစရာကောင်းလှပါတယ်ရှင်။ဆုရရှိခဲ့တဲ့သရုပ်ဆောင်ဖွေးဖွေးအတွက်ဂုဏ်ပြုစကားလေးပြောခဲ့ပါဦးနော်။
ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဆေးရုံကြီးများမှာ ဆေးကုသနေတဲ့လူနာရှင်များကို စောင် ခြင်ထောင်နဲ့အနွေးထည်တွေ သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ထွန်းကိုကို